Iziphuzo ongazithakela zona zikusize ngokwempilo
AMEHLO abona kangcono uma ujwayele ukuphuza iCarrot Juice Isithombe: FOOD NETWORK
ZANELE MTHETHWA | August 21, 2019
IJUSI ayisaphuzelwa kuphela ubumnandi nokwehlisa izidlo kodwa amanye anomthelela omuhle empilweni nasemzimbeni. Lezi zinhlobo zamajusi ezenziwa ngemifino, uyakwazi nokuzenzela ekhaya, uxube izithako ezidingekayo.
Ngokombiko weFood Network neHealth Trends, kuthiwa zonke lezi zinhlobo zamajusi zenza umsebenzi ohlukene emzimbeni womuntu.
Nazi ezinye izinhlobo:
Udinga ukuhlanganisa ispinashi, cucumber, kanye ne-aphula. Le jusi isiza ekukhucululeni ingaphakathi lo mzimba. Iyasiza nokwehlisa isisindo somzimba futhi iyahlala esiswini. Ungaqala ngayo usuku uyiphuze njalo ekuseni noma uma usuyolala.
Yenza izimanga esikhumbeni. Uma unenkinga yesikhumba esimaholoholo nezinduna, le jusi iyasiza. Udinga izigaxa zikatamatisi uzixovele kwi-blender bese ufaka kancane amanzi. Iyasiza nokuvikela isikhumba elangeni.
Njengoba kwaziwa ukuthi * -carrot uyasiza kwabanenkinga yamehlo, nayo le jusi iyasiza kakhulu. Udinga ukugaya * -carrot ufake namanzi. Ungafaka no-ginger ogayiwe ukuze inambitheke. Ngaphandle kokusiza ukucacisa amehlo, le jusi iyasiza nasekucaciseni isikhumba.
Uma unenkinga yezilonda ezingapholi, le jusi ingawenza umehluko.
Le jusi isiza kwabananenkinga yokushoda kwegazi, ikakhulukazi abangayi kahle esikhathini. Ihlanza isibindi yenze negazi lihambe kahle emzimbeni. Yakha ama-cells egazi anele emzimbeni. Udinga ukubilisa izigaxa zika-beetroot amanzi angabi maningi.
Sebenzisa lawo manzi ukwenza ijusi.
Kulena udinga ukukhamela ulamula emanzini afudumele. Gaya * -ginger uhlanganise bese ufaka noju. Le jusi isiza ekulweni nomkhuhlane. Iyasiza ukuvula inhliziyo kwabangakuthandi ukudla. Iyanconywa nangokwehlisa isisindo somzimba.